Ukufumana iArhente yoThengiso kunye neNtengiso egqibeleleyo | Martech Zone
Ukufumana iArhente yoThengiso kunye neNtengiso egqibeleleyo
NgoLwesihlanu, Oktobha 9, 2009 NgeCawa, nge-13 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Ukuba bendikule nkampani ndikhangela intengiso egqibeleleyo okanye iarhente yentengiso, bendiya kufumana iarhente enezi zinto zilandelayo:
Iarhente egqibeleleyo iyayiqonda indlela yokulinganisa kunye nokulinganisa into nganye.
Iarhente egqibeleleyo ilanda zonke iitekhnoloji zakutshanje.
I-arhente egqibeleleyo inee-videographer, italente yezwi, uyilo lokuprinta, uyilo lwegraphic, iingcali zokwenza uphando kwiinjini yokukhangela, iingcali zentengiso eshukumayo, iingcali zolawulo lwebrand, abaphathi beeprojekthi, ezentengiso kunye nokuguqula iingcali, iingcali zonxibelelwano noluntu, iingcali zokusebenziseka, iingcali zokuhlawula ngokokucofa, iingcali kubloga, iingcali zosasazo zasekuhlaleni, kubahlalutyi iingcali, kunye nabaphuhlisi beqonga ngalinye.
Le arhente igqibeleleyo ayikho. Yeka ukubakhangela!
Ukuba inkampani yakho ifuna iqabane ngokwenyani kwimizamo yokuthengisa, iarhente yakho egqibeleleyo kufuneka ibe nezi mpawu zilandelayo:
Iarhente yakho egqibeleleyo iyakuqonda, iimveliso kunye neenkonzo zakho, izicwangciso, ubume beshishini lwangaphakathi, kunye nezakhono onazo ngaphakathi.
Iarhente yakho egqibeleleyo iyayazi i-niche ebalaseleyo kuyo -Kwaye bagxile kuloo endaweni yokuzama ube yinto yonke kuye wonke umntu.
Iarhente yakho egqibeleleyo ixhumeke kakuhle kolu shishino, ukwazi apho unokufumana khona kwaye udibane neengcali zeshishini. Bayazi apho banokufumana khona ababhali bevidiyo, italente yezwi, abayili bokuprinta, abayili bemizobo, iingcali zokwenza uphando kwiinjini yokukhangela, iingcali zentengiso eshukumayo, iingcali kulawulo lwebrand, abaphathi beeprojekthi, ezentengiso kunye nokuguqula iingcali, iingcali zonxibelelwano noluntu, iingcali zokusebenziseka, iingcali zokuhlawula ngokucofa nganye, iingcali zebhlogi, ezentlalo iingcali zeendaba, kubahlalutyi iingcali, kunye nabaphuhlisi beqonga ngalinye.
Iarhente yakho egqibeleleyo iyayazi indlela yokulawula iiprojekthi usebenzisa izixhobo zangaphandle ukuze ungakhathazeki ngayo. Iarhente yakho egqibeleleyo mhlawumbi iyakubhatala kube kanye, kwaye ikhathalele ukuhlawula zonke ezinye izixhobo.
Izolo, bendikumthengi onokubakho kwaye umnxibelelanisi wahlanganisa iinkampani ezingekho ngaphantsi kwe-5 ukuba zize kudibana nomthengi wakhe. Uye waqonda ukuba imiceli mngeni yabo mikhulu kakhulu kunobuchwephesha obabunabo inkampani yakhe ngaphakathi-ke waphuma waya kuchonga ingqokelela efanelekileyo yeengcali zalapha ekuncedeni inkampani. Ndathobekile ukuba ngomnye wale mafemu.
Nokuba ndiza kusebenza na ngethemba elihlala lihleli ukuze libonwe… kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba umthengi sele eyifumene iarhente yokuthengisa egqibeleleyo ene-Evereffect.
Abanye abantu edolophini bakholelwa ukuba bayakhuphisana nefemu yam okanye abanye. Yimbono emxinwa yeshishini. Endaweni yoko, intsebenziswano kufanele ukuba sisikhalo sethu sokuhlanganisana. Ukuba sonke sisebenza kunye ukufumana iziphumo ezilungileyo kubathengi bethu, abathengi bethu bayakhula, ummandla wethu uyakhula, kwaye siyakhula.
Oko Sinokukufunda kuKanye, uTaylor noBeyonce
Ngaba i-Twitter ikwisiteshi sakho seNkonzo ngoku?
Oktobha 9, 2009 ngo-11: 59 PM
Ewe ngokunjalo! Ndiyayithanda intlanganisela, intsebenziswano, indlela edibeneyo. Wonke umntu uyaphumelela.
Oktobha 11, 2009 ngo-3: 31 PM
Kuyanceda kakhulu ukuba, njenge-arhente unokuyiqonda ngokucacileyo into oyenza ngcono.